Amanqaku kaStefanie Siclot Martech Zone |
Amanqaku ngu UStefanie Siclot
Ikhasi lokufika lelinye leziseko eziza kunceda abathengi bakho bahambe kuhambo lomthengi wabo. Kodwa yintoni kanye kanye? Kwaye okubaluleke ngakumbi, inokukhulisa njani ngokukodwa ishishini lakho? Ukushwankathela, iphepha lokufika elisebenzayo lenzelwe ukuba umthengi athathe amanyathelo. Oku kunokuba kukubhalisela kuluhlu lwe-imeyile, ukubhalisela umsitho ozayo, okanye ukuthenga imveliso okanye inkonzo. Ngelixa injongo yokuqala ingahluka,